Usuku My Pet » 5 Izizathu Kungani Izinsuku Breakfast First Ingabe Brilliant
Ubathola ingcindezi low:
Ukuhlangana ekuseni kusho ukuthi okulindelwe for the "ngobuqotho ngokuphelele" usuku kungaba sakugcina ngangokunokwenzeka nhlangothi zombili. Akunakwenzeka ukuthi kungaba uyozizwa kwambangela ngokweqile noma self abazi in a ogobhozayo, restaurant sasekuseni-egxile, njengoba kwawona isikhathi kwasekuseni okuye kwaba ngokwesiko wathandana low key. Nokho, ngokungafani nje ukuhlangabezana up for ikhofi, dates sasekuseni ngokuzenzakalelayo ukunikeza more esakhelwe amathuba ukwazi quirks of the omunye umuntu. From ukufunda ukuthi bathanda isoso on amaqanda abo nendlela ezizizwa ngayo pancake vs Waffles, dates sasekuseni ukuhlinzekela lula "hamba-to 'izihloko ingxoxo lapho kungoni of ungakwazi ukucabanga engizokusho.
Akukho elindele yini okwakwenzeka emva
Kungakhathaliseki ukuthi ezibuza uma kuyoba isimemo efulethini usuku lwakho noma ebusuku ukuhlola edolobheni ndawonye, dates dinner ngokuvamile ihambisana ukungaqiniseki mayelana nendlela / lapho ncamashi ebusuku kuzophela. With dates sasekuseni, ngokwesinye isandla, isikhathi ukuphela kungaba angabacwasi kalula pre-kuhlelwe. Empeleni, kungaba ngisho ingxenye ukumisa initial usuku nesikhathi. Ngokwesibonelo, esikisela usuku sasekuseni at 9am ayengase futhi kuhambisane abayitoho, "Ngilitholile umdlalo igalofu ehleliwe 11;"Ngale ndlela, kokubili wena usuku zakho-the-azi mayelana esingakanani usuku uyokuma. Ukwengeza, kokuxoxa ngayinye izinhlelo zakho for the usuku lonke kungaba esinye lula "hamba-to 'undabuzekwayo ngenkathi wena chomp phansi amabhisikidi kanye isobho.
Sinenkosi ikhodi okulula figure-out dress
Ukukhetha i Izingubo for a date lokuqala kungaba kakhulu nerve-wracking kuka ekhetha izinto ikhabethe lakho for a interview umsebenzi. Esiqala First kukhona ngokungangabazeki ezibalulekile, kodwa wokuqonda kanjani dressy noma abayitoho kufanele kube isinyathelo sokuqala nithandana ngokuvamile imbangela yokucindezeleka okungafunwa bonke abathintekayo. With sasekuseni, Nokho, nasiya kabanzi cishe ngokuqinisekile out of the umbuzo. Nakuba ukubonisa nokujuluka kanye t-shirt mhlawumbe akukhona elihle noma, dates sasekuseni namanje ngokuzenzakalelayo phoqa a ekhululekile, abayitoho (kodwa lengenamaphutsa) yokugqoka.
Ngokungafani usuku dinner lapho bill kungenzeka usuke appetizers kuya iziphuzo entrees to kophudingi, dates sasekuseni cishe okuqinisekisiwe muhle kuqhathaniswa ezingabizi ezindaweni iningi. Sure, add-on a bill ingase ihlanganise iyala ikhofi noma orange juice noma ukuphuma a side izithelo isaladi esikhundleni Browns hashi, kodwa jikelele, dates sasekuseni kulula pretty ukubikezela intengo. Lena ibhonasi kabili kokubili wena kanye nosuku lwakho: Ngeke uhambe broke ngosuku engase embi kuqala, futhi yena / yona ngeke kabi ngawe kokuchitha isamba enkulu ukumhlangabeza / yakhe.
Ubathola lokho champions do ...
Kulungile, kanjalo lena kungase kube kancane elula, kodwa ucwaningo lubonisa ukuthi bedla ukudla kwasekuseni enempilo esehlakalweni njalo ehambisana nempilo jikelele engcono ithuba anda yokuba akwazi ukufinyelela isisindo ukulahleka imigomo. Empeleni, omunye "tips best" ongaqala on a yimpumelelo kwesisindo Uhambo ukuba adle ukudla kwasekuseni nsuku zonke. Lokhu kungenxa yokuthi udla ukudla kwasekuseni akuyona nje indlela okumnandi ukuqala usuku lwakho, kodwa futhi indlela lezinkanyezi kukhahlela-ukuqala umzimba wakho out of zokuzila mode yayo sasebusuku. Kalula nje, ngokumema usuku lwakho ukudla kwasekuseni yindlela enhle ukusho, "Hey, Ngingumfana umuntu othanda impilo yami, futhi mina nje kungenzeka obakhathalelayo nezakho!"